Jeegaga kicinta federaalka ayaa imanaya xisaabaadka bangiga ee Iowans iyo sanduuqyada boostada, halk | KWIT
Xafiiska Better Business Bureau ayaa sheegaya in dadka wax khiyaameeya ay isku dayaan inay dadka ku dhaqaaqaan ka hor inta aysan ka fikirin xaaladda.
Muwaadiniinta Iowa ee Horumarinta Bulshada waxay ugu baaqeysaa sharci dejiyeyaasha Iowa in ay ku bixiyaan keydka lacagta gobolka bilyan-doolar iyo dheeri miisaaniyadeed ee gargaarka aafada. Kooxda ayaa saakay isugu soo baxay banaanka hore ee xarunta gobolka.
Kooxda ayaa ku baaqeysa caymiska Medicaid in la gaarsiiyo dhamaan dadka aan caymiska lahayn ee Iowans ilaa dhamaadka sanadka iyo bixinta halista shaqaalaha muhiimka ah, fasax lacageed oo la dammaanad qaaday, iyo caawimaad daryeel cunug oo dheeraad ah waalidiinta shaqeeya. Kooxda ayaa sidoo kale dooneysa in gobolka uu siiyo caawinaad kiro ah shaqsiyaadka wajahaya ka saarista. Sharci-dajiyayaasha Jamhuuriga ayaa ka horyimid baaqyadii hore ee ahaa in la isticmaalo wax kasta oo ka mid ah keydka lacagta doolarka ah ee gobolka iyo wixii dheeri ah.
Iowa waxaay soo qortay 83 kale oo laxiriira coronavirus taas oo kordhisay wadarta guud ee gobolka 4,222 oo u dhimatay mudadii cudurka. 1,199 kale oo la xaqiijiyey ayaa la soo sheegey maanta, taas oo ka dhigeysa tirada guud ee kiisaska Iowa ilaa ku dhowaad 300,000. Tirada dhimashada waa tii 17aad ee ugu sarreysa qofkiiba ee Maraykanka. In ka badan 50 degmo Iowa waxay leeyihiin celcelis macquul ah oo 14-maalmood ka sarreeya 15%, heer tilmaamaya faafidda fayraska bulshada ee muhiimka ah.
Warbixinnada caafimaadka ee Degmada Siouxland waxaa jiray 22 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska ee Gobolka Woodbury 24-kii saac ee la soo dhaafay mana jirto dhimasho cusub. Degmadu waxay leedahay boqolkiiba 15.6 boqolkiiba waxtar.